पिसिआर परीक्षण बढ्दा संक्रमितको संख्या पनि बढ्यो – Health Post Nepal
२०७७ असोज २३ गते १६:५५
पछिल्लो केही सातायता नेपालका कोरोना संक्रमितको दर ह्वात्तै बढेको छ। केही सयको संख्यामा देखिने संक्रमणको दर दुई सातायता दुई हजारभन्दा माथि पुगेको छ। बिहीबार त करिब चार हजारको नजिक पुगेको थियो।
यसरी संक्रमितको संख्या एकाएक बढ्नुमा पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउनुले पनि देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसका साथै अर्को कारण चहलपहल बढ्नु र नागरिकले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड नअपनाउनुले पनि कोरोना संक्रमितको दर बढ्न थालेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम बताउँछन्।
‘पटक–पटक हामीले मापदण्ड अपनाउन अनुरोध गर्दै आएका छौं। तर, नागरिकस्तरबाट पूर्ण रुपमा पालना भएको देखिँदैन। पिसिआर परीक्षणको दायरा बढ्नुले मात्रै संक्रमित बढेका होइनन्’ उनले भने, ‘नागरिकले लापरबाही गर्दा पनि स्थिति भयावह आउँदैछ।’
उनले सबै नागरिकलाई स्थिति सही भए अर्को वर्ष धुमधामसँग चाड बनाउन पाइने भएकाले यसवर्ष सबैको जीउज्यानका खातिर भीडभाड नगर्न अनुरोध गरे।
भदौको अन्तिमसम्म आठ÷दश हजारको दरमा पिसिआर परीक्षण हुदै आएकोमा अहिले करिब १३ हजारभन्दा बढी पुगेको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा जम्मा १३ हजार ८७९ पिसिआर परीक्षण गरिएको छ।
यससँगै संक्रमितको संख्या पनि बढ्दो छ। विगतको भन्दा अहिले उपत्यकामा नै धेरै संक्रमित फेला पर्न लागेका छन्। यही स्थिति रहे दशैंसम्म पनि उपत्यकाले कोरोना संक्रमितको भार थाम्न नसक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
दैनिक एक हजारभन्दा बढीको संख्यामा त उपत्यकाभित्रै संक्रमित थपिँदैछन्। शुक्रबार देशभर दुईहजार ५९ संक्रमित थपिएकोमा उपत्यकाभित्र मात्रै एक हजार चारसय ९ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्।
जसमध्ये काठमाडौंमा एक हजार एकसय १६, भक्तपुरमा एकसय ३० र ललितपुरमा एकसय ६३ जना रहेका छन्। यस्तै देशभर हालसम्म एकलाख संक्रमित नाघिसकेका छन्। शुक्रबार थपिएकासँगै देशभर एकलाख ६ सय ७६ जना कोरोना संक्रमित पुगेका छन्।
कोरोना संक्रमणसँगै मृत्युदर पनि बढीरहेकाले सबैलाई सचेतना अपनाउन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा कोरोना नियन्त्रणमा आउँदैगर्दा काठमाडौंसहित भक्तपुर र ललितपुरमा भने जनघनत्व धेरै भएकाले संक्रमण उच्च बन्दैछ।
यस्तै मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार शुक्रबार १० जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ६ सय पुगेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार संस्थागत आइसोलेसनमा ११ हजार एकसय ७६ जना बसेका छन्, भने होम आइसोलेसनमा १५ हजार ८७७ जना छन्। यस्तै पछिल्लो २४ घण्टाको अवधिमा एक हजार ६ सय ८० जनाले कोरोना जितेका छन्।
देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या २७ हजार ५३ रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए। क्वारेन्टाइनमा भने चार हजार ७ सय ३ जना बसेका छन्। कोरोना जित्नेको दर ७२ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।